आफूमाथि १५ वर्षको उमेरमा बलात्कार भएको हलिउड अभिनेत्री मूरको भनाइ
असोज ७, २०७६
काठमाडौं – हलिउड अभिनेत्री डेमी मूरले १५ वर्षको उमेरमा आफूमाथि घरमै बलात्कार भएको बताएकी छन् । आफ्नी आमालाई ५०० डलर दिएको दाबी गर्ने पुरुषले बलात्कार गरेको उनले बताइन् ।
५६ वर्षीया यी अभिनेत्रीले आफ्नो संस्मरण इन्साइड आउटका बारेमा गूड मर्निङ अमेरिकासँग सीधासीधा कुरा गर्ने क्रममा यो दाबी गरेकी हुन् ।
डायन सयरसँग कुरा गर्दै उनले आफू घरमा आउँदा आमाले चिन्ने एक पुरुष बसिरहेको बताइन् ।
उसले मूरलाई बलात्कार गरेपछि उनकी आमाले उनलाई बेचेको बताएको खुलासा गरिन् । किताबमा उनी लेख्छिन्, ‘त्यो बलात्कार थियो । अनि मलाई ध्वस्त बनाउने धोका उक्त व्यक्तिको क्रूर प्रश्नमा झल्कियो : तिम्री आमाले तिमीलाई ५०० डलरका लागि वेश्या बनाउँदा कस्तो लाग्छ ?’
मूरका अनुसार, उनकी आमा जँड्याही थिइन् र उनी किशोरी हुँदा आमाले बारहरूमा लग्ने गर्थिन् ताकि पुरुषहरूले उनलाई ध्यान दिऊन् । आमाको मृत्यु सन् १९८८ मा भयो ।
उक्त व्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा मूरले भनिन्, ‘भित्री हृदयबाट भन्दा, हैन । आमाले उसबाट सीधासीधा पैसा लिनुभएको हैन । तैपनि उहाँले त्यो व्यक्तिको पहुँच मसम्म दिनुभयो र ममाथि अत्याचार गर्ने अवसर दिनुभयो ।’
मूर सन् १९९० को दशकको सफल अभिनेत्री हुन् । उनले गोस्ट, अ फ्यु गूड मेन र इनडिसेन्ट प्रपोजल लगायतका सफल फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो पुस्तक आफ्नी आमा अनि आफ्ना पूर्वपति ब्रुस विलिससँगको सम्बन्धबाट जन्मेका तीन छोरीलाई समर्पण गरेकी छन् ।
सुशान्त सिंह राजपूतको एकपछि अर्को फिल्म खोस्ने अभिन...
सुशान्तकी दिदी भन्छिन् – भाइ डिप्रेशनमा थियो तर आत्म...
सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युको न्यायिक अनुसन्धान गर्...
उत्साह सफलताको पर्याय : आफूलाई कमजोर ठान्नु महापाप
श्रीलंकाको त्यो मन्दिर, जहाँ राखिएको छ भगवान गौतम बुद्धको दाँत !
राईलाई सचिवमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय
हरेक महिना कोरोनाविरुद्धको लाखौँ खोप उत्पादन गर्ने रुसको दाबी
ग्याजेटको जालमा फसेको जिन्दगी: किन कम सुत्न थाले मानिस ?
हुनसक्छ कोरोनाको ठोस उपचार कहिल्यै भेटिँदैन- डब्लुएचओ
पोल्याण्डको सर्वोच्च अदालतको फैसला डुडाको पक्षमा
बाढीपहिरोपीडितका घर बनाइदिने मुख्यमन्त्रीको घोषणा
साँगाबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने १३ मा कोरोना पोजिटिभ